Sempotra tao anatin’ny ‘Airpokalypsa’ vokatry ny zavona misy poizina nanamontsana ny faratampony teo aloha i Beijing · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2015 5:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, русский, 日本語, Italiano, Español, Deutsch, English
Beijing rakotry ny zavona mampididoza. Tamin'ny 30 Novambra no henjana indrindra tamin'ity taona ity, ny andro nanombohan'ny fifampiresahan'ny ao amin'ny Firenena Mikambana ny toetrandro tao Parisy. Sary avy amin'ny Weibo ofisialin'ny Firenena Mikambana.
“Beijing androany…Smog. Misokatra androany ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana misahana Toetrandro. Inona no antenainao?” hoy ny fanontanian'ny kaonty Weibo, tambajotra serasera shinoa mitovy amin'ny Twitter, tamin'ny 30 Novambra, andro nandrasana fatratra hanombohan'ny zaikaben'ny fiovan'ny toetrandro ao Parisy .
“Tokony notontosaina tao Beijing ny fihaonambe,” hoy ny navalin'ny Shinoa mpiserasera iray, milaza sompirana ireo fotoana fohy ahitana ny lanitra manga mandritra ny fotoan-dehibe tahaka itony — tahaka ny tamin'ny “matso miaramila manga” sy ny “APEC manga” — rehefa miantoka ny kalitaon'ny rivotra amin'ny alalan'ny fanakatonana ozinina sy famerana ny isan'ny fiarakodia mandeha eny an'arabe ny governemanta.
Saingy mbola mirakotra zavotsetroka mampididoza indray i Beijing. Nandrakitra ny ratsy indrindra tamin'ity taona ity ny tanàna tamin'ny 30 novambra raha namaky ny taha PM 2,5 ao amin'ny distrika sasantsasany efa mila hahatratra ny 1000 μg/㎥, in-100 avo heny amin'izay heverin'ny Fikambanana Manerantany Misahana ny Fahasalamana ho fetra mahasalama. Navoakan'ny governemanta ny fanairana laoranjy — dingana fahatelo amin'ny efatra — manome ny olompirenena hametra ny fivoahany an-trano sy ny asam-pananganana, araka ny Drafi-pahamehan'i Beijing amin'ny Hatevenan'ny Fandotoan'ny Rivotra. [fanamarihan'ny mpandika teny malagasy: ny mpanara-baovao dia mahafantatra fa namelona ny fanairana mena, dingana fahaefatra farany, ny governemanta shinoa tamin'ny 8 desambra 2015]
Kitin-draha manify dia manify ny PM 2.5; latsaky ny 20 isanjaton'ny singam-bolo ny savaivony. Noho ny habeny, dia afa-miditra hatrany amin'ny havokavoka izy, ka mampitombo ny mety hitrangan'ny tsi-fetezan'ny fo sy ny lalandrà bebe kokoa ka anisan'izany ny homamiadan'ny havokavoka, fahatapahan'ny lalandrà ary ny sohika.
Ny Tranoben'ny Televiziona Foibe ao Beijing rakotry ny zavona matevina. Sary avy amin'ny mpisera Weibo @Yaba
Araka ny nasehon'ny Birao Minisipalin'i Beijing misahana ny fiarovana ny tontolo iainana dia in-55 ny isan'ny andro mba tao anatin'ny fetra ny kalitaon'ny rivotra nandritra ny enimbolana voalohan'ny taona 2015, izany hoe nahazo valo andro mihoatra noho ny tamin'ny herintaona talohany, ary nihena 15,2 isanjato ny hakitroky ny PM 2,5. Nampanatena ny Ben'ny Tanànan'i Beijing, Wang Anshun, fa hahatratra 70 μg/cm² ny fanaraha-maso ny PM 2,5 alohan'ny 2017, araka ny drafitra miady amin'ny fandotoana napetraky ny fitondrana foibe tamin'ny 2013.
Nandritra ny fifampiresahana momba ny toetrandro tao Parisy tamin'ny 30 Novambra ny filoha shinoa, Xi Jinping, no nilaza “hampihena ny fandefasana eton'arina anelanelan'ny 60-65% [isaky ny harinkarena faobe?] raha ampitahaina ny tamin'ny 2005 ary hampitomboina 20% ny angovo tsy milevina mialoha ny taona 2030.”
‘Naninona no mailaka tamin'ny fanasivanana ny lahatsarim-panadihadian'i Chai Jing?’
Ny lanitra mavo sy volondavenona no nampahatsiahy ny olona ilay lahatsarim-panadihadiana mahaleotena iray fantatra amin'ny hoe“Ambanin'ny Tafo Boribory” navoakan'i Chai Jing, mpanao gazety malaza niasa tao amin'ny televizionam-panjakana shinoa (CCTV) tamin'ny febroary. Nanamarika ny mpiserasera iray:
Manjavona ao anatin'ny indray alina ny trano manaka-danitra sy ireo trano malaza. Tsy mety mahita ny lokon'ny jiron'ny fifamoivoizana eny amin'ny faran'ny lalana aho ho fiarovako ny aiko. Te-hanontany ny manampahefana sasany aho: Naninona no mailaka tamin'ny fanasivanana ny lahatsarim-panadihadian'i Chai Jing? Ary na iza na iza nanao izany, nahoana ry zareo no nanapa-kevitra fa tsy tompon'andraikitra mihitsy ny resaka fandotoan'ny rivotra?
Ny fanadihadian'i Chai dia nanomboka tamin'ny fandidiana tsy maintsy natao tamin'ny zanany, teraka tamin'ny 2013 nisy fivontosana tsotra. Tohina tamin'ny fijalian'ny zanany izy ka nanomboka nanao famotopotorana ireo orinasan-tao-zava-baventy sy ny fitsipiky ny fandotoan-drivotra ataon'ny governemanta avy amin'ny volany manokana, izay namoaka ny tombontsoa [manokana] ao ambadiky ny Petroleum China sy ny Sinopec — orinasan'angovo goavana roa tantanin'ny fanjakana manao ampihimamba ny tsena anatiny. Imbetsaka nitsidika firenena tandrefana toa an'i Fanjakana Mitambatra (UK) sy Etazonia izy haka ny fomba tsara kokoa ifehezana ny fandefasana raha mpandoto.
Sambany nisy Shinoa mpanao gazety nitondra ny resaka fandotoan'ny rivotra nahatratra ny sehatra fiadian-kevitry ny vahoaka, na dia teo aza ny fahadisoana ara-tsiantifika sasantsasany sy ny tsy fahampian'ny antotanisa marina tao amin'ny filma.
Noho ny tahotra mety isian'ny fanerena avy amin'ny vahoaka ateraky ny lahatsarim-panadihadiana, dia nesorin'ny mpanivana hiala tamin'ny haba-tranonkala ao an-toerana ilay lahatsarim-panadihadiana, anisan'izany ny tao amin'ny solovavan'ny governemanta Isanandrom-Bahoaka, ary nampangina adihevitra mangotraka nialoha ny fivoriana isantaonan'ny Kongresim-Bahoakam-Pirenena.
Mihaotraotra ivelany fotsiny ny tatitra ataon'ny fampitam-baovao ao an-toerana
Navoakan'ny lahatsarim-panadihadiana nampisaina nataon'i Chai ny tombontsoa manokana azon'ireo olona ambony ao amin'ny orinasan'angovo ao an-toerana sy ny goragoran'ny departemantan'ny tontolo iainana amin'ny fampiharana ny fetra faran'ny fandotoana ataon'ny orinasam-pamokarana tao-zava-baventy.
Ankilan'ny fanadihadian'i Chai, dia ankavitsiana no ahitana fanangonam-baovao lalina ao amin'ny fampitam-baovao shinoa momba ireo mpandray anjara manana tombontsoa amin'ny tsy fisian'ny fiovana ara-tontolo iainana. Matetika ny tatitra dia mifantoka amin'ny dingana azon'ny tsirairay raisina hiarovana ny fahasalamany sy ny fepetra raisin'ny governemanta rehefa manjavona dia manjavona ny andro.
“Na dia miresaka zavotsetroka sy resaka ara-tontolo iainana hafa aza, dia tokony hivesatra ny andraikitra hatrany ny fampitam-baovao ao an-toerana,” hoy ny navoitran'ny lahatsoratry ny Isanandrom-Bahoaka, “hanome tatitra ara-tsiantifika sy lalina amin'ny vahoaka, sy hiezaka hanolotra ny endrika tsaran'ny firenena.”
Nanolo-kevitra tamin'ny Sampam-baovaom-Panjakana Xinhua hampiasa ny toerana misy azy i Edward Wong, lehiben'ny biraon'ny New York Times ao Beijing, handalina kokoa ireo antony mampaloto ny rivotra:
Tokony hampiasa ny 内参 ananany ny Xinhua hanatontosa ny fanaovan-gazety hamoaka lahatsoratra amin'ny vahoaka amin'ireo tombontsoa manokana ao ambadiky ny fandotoana.
Mampalahelo tokoa ny zava mitranga ao Beijing ao momba ny fahalotoan ny tontolo iainana . Raha ny fahafantarako azy dia anisan ny vahaolana azo iadiana amin ny fandotoana ny tontolo iainana ny fambolen kazo ; ka inona loatra re no manakana ny Fitondram panjakana any China tsy hamboly hazo marobe ,ao amin ny tanindrizareo Sinoa ihany na any amin ny tany any amin ny firenena hafa manodidina azy ; satria mahazo volabe sy manam bolabe rizareo vokatry ny famokarana indostrialy izay mandoto ny tontolo iaianana ka tokony hisy ampahany avy amin ny vola azo avy amin izany famokarana izany hatokana hambolena hazo hiarovana ny tontolo iainana .
10 Desambra 2015, 10:54